धरानको मुख्य धार्मिक स्थल विजयपुर क्षेत्र धरान उपमहानगरपालिकाको वडानं. १४ को विजयपुर क्षेत्र कुनै दर्गम गाउ भन्दा कम छैन । विजयपुर धरान उपमहानगरको १४ नम्वर वडा हो । त्यहा पहाडी दुर्गम ठाउमा भन्दा कम छैन । विजयपुरमा नेपाल टेलिकमद्धारा वितरित मोवाईल फोनको नेटवर्क नआउने र भनेको बेलामा मोवाईल नआउने र लगाग्ने समस्या छ । विजयपुरबासीले पटक पटक नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमको मोवाईलको लागि टावर राखिदिन नेपाल टेलिकम धरान शाखालाई अनुरोध गरे पनि मोवाईल टावर अझै राखिएन । स्थानियबासिन्दा आफै लागि परेर मोवाईलको टावर राख्नका लागि भाडामा जग्गा दिने भनेर राजी भए पनि सस्तोमा जग्गा खोज्दै टेलिकम विजयपुरको होचो ठाउ पिण्डेश्वर क्याम्पसको जग्गामा पुग्यो । त्यहा भाडा कम दिने भए पछि क्याम्पसले पनि नवनाउन भनेको छ । विजयपुरको मुख्य चौक विजयपुर चौकमा नेपाल टेलिकमको टावर भए पनि त्यहाको टावरले विजयपुरको माथिल्लो बेल्ट नारायणपुर, तल्लोबेल्ट दन्तकाली मन्दिर, डाडागाउ क्षेत्रमा भ्याउदैन ।
यसले गर्दा जहा विजयपुरवासीको घना बस्ती रहेको छ त्यहा मोवाईल राम्रो संग नटिप्ने समस्याले आजित विजयपुरबासीको समस्या टेलिकमले सुनेन । यदी यस्तै अवस्था रहीरहने हो भने टेलिकमको गतिविधि र नियतमाथि विजयपुरबासीले आसंका गर्न थालेका छन् । विजयपुरमा अप्टिकरल फाईवर विच्छयाउने काम भईरहेको छ । विजयपुरबासीले अप्टिकल फाईबर होईन मोवाईल फोन राम्रो संग चल्न सक्ने टावरको चाहाना राखेका हुन् । नेपाल टेलिकम धरान शाखाले विजयपुरलाई मोवाईल सेवामा ठुलो विभेद गरेको छ । त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरु पुर्वग्राही भएको भन्न थालेका छन् । पुर्वको एउटा धार्मिक पर्यटकीय केन्द्र विजयपुरमा मोवाईल सेवा प्रभावकारी नहुदा यहा घुम्न आउने धार्मिक पर्यटकहरु समेत समस्या पर्ने गरेका छन् । मोवाईलमा साथीलाई फोन गर्नुप¥यो भने उच्च ठाउ र धरान बजार देखिने स्थान खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मोवाईल सेवा प्रभावकारी नहुदा विजयपुरबासीहरु आजित भएका छन् । निजि मोवाईल एनसेलले धरानको विजयपुरमा रहेको दुई स्थानमा टावर राखेर सेवा सुचारु गरेको छ ।
तर सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले किन यसो गर्न सकेन । विजयपुरमा नेपाल टेलिकमको एउटा टावर राख्दा के कस्तो प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने हो ? सरकारले तिर्ने भाडा सस्तो खोज्दै यसपटक पनि विजयपुरमा मोवाईलको टावर नराखिने छनक देखिएको छ । त्यसैले सरकारी सेवा भनिने नेपाल टेलिकमको मोवाईल सेवा विजयपुरमा प्रभावकारी बनाउ । यदी होईन भने के कारणले विजयपुर जस्तो उच्च डाडामा टावर राख्न समस्या प¥यो नेपाल टेलिकम जवाफ देउ ।